Orgi Liqe oo Qaylo Afka Furtay, Isaga oo Leh Ismaaciilow Adeer Itobiya I Gee – Rasaasa News
Orgi Liqe oo Qaylo Afka Furtay, Isaga oo Leh Ismaaciilow Adeer Itobiya I Gee
Jun 2, 2010 Isaga oo Leh Ismaaciilow Adeer Itobiya I Gee, Orgi Liqe oo Qaylo Afka Furtay
Orgi Liqe waa magacii hore ee yiqiin Maxamed Cumar Cismaan xiligii uu ka midka ahaa askartii Somaliya, in kasta oo xiligan aad loogu yaqaan Jwxo-shiil, ayaa afka qaylo furtay isaga oo leh yaa Itobiya ii geeya. Maqaalkan waxaa qortay shabakada wabishabeele oo iyadu aad uga hadasha arimaha Somalida Ogadeeniya.
London, 01-Jun-2010 – Wareysi dheer oo uu gudoomiyaha garab ka mid ah jabhadda ONLF, Admiral Maxamed Cumar Cismaan, siiyey Radio Ogaal ayuu ugu baaqay madaxweynaha dowladda Jabuuti, mudane Ismaaciil Cumar Geelle, inuu dhex-dhexaadiyo dhankooda iyo dowladda Itoobiya.
Admiral Maxamed ayaa tilmaamay inuu madaxweyne Ismaaciil yahay shaqsigii ku habboonaa xal u helista dhibaatooyinka faraha badan ee ka taagan Geeska Afrika, si nabadgalyo waarta loogu soo dabaallo guud ahaan gobolka.
“Ismaaciil Cumar Geelle waa madaxweyne, Geeska Afrikana dhibaatooyin badan baa ka taagan, xil weyn baana ka saaran dhibaatooyinkaa Geeska Afrika ka taagan oo ay qadiyadda Ogadenya ay kamid tahay inuu tillaabo ku habboon uu ka qaado oo mataqaanaa sidii hashiis iyo nabadgalyo looga gaadhi lahaa uu ka shaqeeyo, yacne, xil baa runtii ka saaran,” ayuu yiri Admiral Maxamed.
Maxamed ayaa muujiyey sida uu ururkiisu diyaarka ugu yahay inuu madaxweyne Ismaaciil soo dhexgalo arrimaha iyaga iyo dowladda Itoobiya ay isku-diidanyihiin.
“Inagu aad iyo aad baanu ugu kalsoonnahay una qaddarineynaa madaxtinimadiisa [Ismaaciil] iyo tallaabooyin uu ka qaaday Soomaaliya iyo arrimaheedi waagii hore. Marka inane aad iyo aad baanu u sugeynaa inuu qaddiyadda Ogadenya uu wixii munaasab ah oo dadkaasi xuquuqdooda ay ku helayaan inuu tillaabo noocaas ah ka qaado aad iyo aad baanu u soo dhaweyneynaa,” ayuu Admiralka hadalkiisa raaciyey.
Jabahadda ONLF ayaa kal hore diiday ergo ka koobneyd hogaamiye dhaqameedyada deegaanka, kuwaasoo ugu yimid dalalka Reer Galbeedka, si ay u furaan wadahadal dhexmara iyaga iyo dowladda. Dowladda Itoobiya ayaa xiligaas ONLF siisay doorashada saddex wadan midkood: Jabuuti, Yemen ama Kenya, taasoo ay ONLF ku gacansaydhay, iyadoo markaas ku adkeysatay in wadahadalka lagu qabto dal kamid ah dalalka Reer Galbeedka.
Hadalka Admiral Maxamed ayaa muujinaya in ay jabhadda ONLF-garabkiisu wax ka badashay siyaasadaheedi hore, arrintaas oo soo dadajin karta wadahadal buuxa oo dhexmara iyaga iyo dowladda, taasoo dhabarjab ku noqon doonta inta ka macaashta dhiiga shacabka deegaanka Soomaalida, oo iyagu daneeya collaad joogta ah.
Shacabka deegaanka Soomaalida oo ay soo kartay dhibaatooyinka collaadaha ayaa dhawaan si weyn u soo dhaweeyey hashiis dhexmaray jabhadda UWSLF iyo dowladda. Shacabka ayaa sidaas oo kale diyaar u ah inay soo dhaweeyaan hashiis dhexmara ONLF iyo dowladda.
Kuwa diidan inuu hashiis ka dhaco deegaanka Soomaalida ayaa ujeedooyinkoodu ugu weyn tahay tiigsiya hiyi dhaw, iyagoo qorshahoodu yahay inay taas ku gaadhaan dhiiga shacabka.
Qorshe Burburin ah oo ku Aadan Beelaha Absame, oo ay Wadaan Jwxo-shiil iyo Dawlado Shisheeye
Ina-dhuubo oo Isaga oo Qol ku Dabran VOA Dabada Wax Uga Sheegay!